eNasha.com - हल्लै हल्लाको देश
जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि त्यसै भनिएको होइन रहेछ ! कवि भूपि शेरचनले नेपाल र नेपालीहरुको मज्जाको विश्लेषण गर्दै कविता लेखेका छन्- नेपाल हल्लै हल्लाको देश हो । वास्तवमा बेलाबेलामा यो सटिक रुपमा प्रमाणित हुँदै आएको पनि छ । यहाँ ऋतिक रोशन काण्ड हल्लाकै भरमा घट्यो । माधुरी दीक्षित घटना पनि हल्लाकै भरमा भयो । हल्लाको पछिल्लो संस्करण चाहिँ एसएमएसको रुपमा आएको छ ।
हिजो एकाबिहानैदेखि स्पाइस नेपालको मेरो मोबाइल र नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा लगातार यस्तो सन्देश देखिए- आज नमस्ते मोबाइलको दशौँ वाषिर्क उत्सव हो । यो सन्देशलाई १० जनासम्म पुर्‍याउनुहोस् र दुइ सय बराबरको रिचार्ज पाउनुहोस् ।
यसपछि त के थियो र ! मोबाइलका आधा प्रयोगकर्ताहरु आफ्ना दश जना साथी, संगी, दाजु, भाइ सबैलाई पठाउन थालियो । अरु त अरु मोबाइलमा सेभ गरेर राखिएका अनजान व्यक्तिलाईसमेत एसएमएस गर्न थालियो ।
यो क्रम कतिसम्म जारी रह्यो भने मेरो मोबाइलले त्यो सन्देश गलत भएको सूचना प्रयोगकर्ताहरुलाई पठाउन बाध्य भयो । यसको देखासिकी गर्दै घण्टौँपछि नेपाल टेलिकमले पनि आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुलाई सन्देश पठायो- प्रिय प्रयोगकर्ता, तपाइँले सित्तैमा रिचार्ज गर्न पाउने गलत सूचना पाउनु भएको छ । हामीसँग अहिले त्यस्तो कुनै पनि स्कीम नरहेको तपाइँहरुलाई जानकारी दिइन्छ ।
यसरी एउटा गलत सूचना भूसको आगोसरी भित्रभित्रै सल्किएर लाखौँ व्यक्तिले लाखौँ व्यक्तिलाई त्यो एसएमएस पठाएर लाखौँ पैसा स्वाहा पारे । ती मध्ये एउटा यो लेखक पनि हो । त्यसैले हल्लाको पछाडि नदगुर्नुहोस् है !
मोबाईल हल्ला संविधानसभा माओवादी awards पेट्रोल समलिङगी सेलेब्रिटी अनुभव crisis hi-life streets celebrity festival events